၇ ဇူလိုင် ၂၀၂၀ ၁၆:၄၃ မှစသော အပြောင်းအလဲအသစ်များကို ပြရန်
ဝန်းသိုမြို့‎ ၁၁:၅၄ -၃၆၅၂၀‎ ‎Aungookingofcelestials ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ This article is aboutatown, not township. pls include something of town. 136.228.174.23 (ဆွေးနွေး) ၏ တည်းဖြတ်မူ 522536 ကို ပြန်လည်ပယ်ဖျက်လိုက်သည် စာတွဲ: နောက်ပြန် ပြန်ပြင်ခြင်း
အရေးမကြီး ဝန်းသိုမြို့နယ်‎ ၀၇:၃၉ -၃၅၁၅၇‎ ‎Ninjastrikers ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ Thuyein Htun (ဆွေးနွေး) ၏ ပြင်ဆင်မှုများကို Ninjastrikers ၏ နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်မူသို့ နောက်ပြန် ပြန်ပြင်ခဲ့သည် စာတွဲ: နောက်ပြန် ပြန်ပြင်ခြင်း
ဝန်းသိုမြို့နယ်‎ ၀၇:၀၆ +၃၅၁၅၇‎ ‎Thuyein Htun ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ်
ဝန်းသိုမြို့‎ ၀၆:၅၅ +၃၆၅၂၀‎ ‎136.228.174.23 ဆွေးနွေး‎ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ်
အရေးမကြီး ဝန်းသိုမြို့နယ်‎ ၀၅:၀၁ -၁‎ ‎Ninjastrikers ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ →‎သမိုင်းကြောင်း
အရေးမကြီး ဝန်းသိုမြို့‎ ၀၅:၀၀ -၂‎ ‎Ninjastrikers ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ →‎သမိုင်းကြောင်း
ဝန်းသိုမြို့‎ ၀၅:၀၀ -၃၄၁၄၈‎ ‎Ninjastrikers ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ moved to ဝန်းသိုမြို့နယ်
ဝန်းသိုမြို့နယ်‎ ၀၅:၀၀ +၃၅၅၀၄‎ ‎Ninjastrikers ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ from ဝန်းသိုမြို့
ဝန်းသိုမြို့‎ ၀၂:၂၆ +၃၆၅၂၃‎ ‎136.228.174.23 ဆွေးနွေး‎ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ်
အရေးမကြီး ဒီပဲယင်းမြို့နယ်‎ ၂၁:၀၆ +၂၀‎ ‎Dr Lotus Black ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ 2001:2D8:EA2C:6547:4090:FA2B:88F3:6D34 (ဆွေးနွေး) ၏ ပြင်ဆင်မှုများကို Mayor mt ၏ နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်မူသို့ နောက်ပြန် ပြန်ပြင်ခဲ့သည် စာတွဲ: နောက်ပြန် ပြန်ပြင်ခြင်း
ဒီပဲယင်းမြို့နယ်‎ ၁၅:၂၉ -၂၀‎ ‎2001:2d8:ea2c:6547:4090:fa2b:88f3:6d34 ဆွေးနွေး‎ →‎ကိုးကား စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် Android app edit
"https://my.wikipedia.org/wiki/အထူး:RecentChangesLinked/တန့်ဆည်မြို့နယ်" မှ ရယူရန်